Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere 2 Ele Tẹsalonika 2
ke noolulu Iwu
1 Nhne gbasịri ọvuva ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi nụ kpa a jeeznekwnusi a, a naarịasno anụ rụmu nda aị, 2 mkpọma lákọ anụ mini, ogwnu tụ́ko anụ kwnornu agwna izi ọwhnurninya, mọbu izi berere, mọbu ọkwukwo izi be naakaa nụ a gbarụ, ke naakaa n'ọbochi Nyenwe aị jeehiehna whelem. 3 Anụ kwé nye ọbula duwhu anụ n'apna ọbula, kwnornu nụ ọbochi Nyenwe aị jeehiehna jáava tem okne olulu wam nụ nye wam noolulu iwu va. Nye wam bụ nye Chiokike jaata awhnụwhnu ọkwnukokwnu, 4 O joovulizọ ẹhni a olu megidne kpakara chi ele badnụ neekpenu. O joogwuzote ẹhni a n'Ọro Nsọ Chiokike kaa nụ ọ bụ Chiokike.
5 Anụ chenwanya nụ m kannụ m anụ nhne ka nga me nụ anụ zị. 6 Anụ magwụ nhne noobnosni a ma ọ gharụ ọ whụya iwhne kịtna, kọvu be jeegesi nye ọjo wam n'ige kwesiri. 7 Kwnornu nụ rikne nye wam noolulu iwu nọornu ẹrnu nụ mgwụgwa kịtna, kọvu nye wam ke noobnosni a jaazị kọriri noobnosni a tem be gweme a n'apna. 8 Ige wam be jookpume nye wam noolulu iwu, nye Nyenwe aị Jizọsi jeeji inwe ke ọnu a gbu nụ hite n'onwu va-a-a ke ọvuva a. 9 Nga nye wam noolulu iwu jaava, Ekwensu jeegesi ẹrnu ndu-ẹhni ọ kpahie anya zị ọdo n'ọdo nụ nhne elekema nụ ẹrnu tụ n'anya, 10 nụ kpakara ẹrnu ọjo o jeeji nooduwhu ele nọonwu ọnwu. Be whu etekne kwnornu nụ be kwéle o kweru ezi ọka ma Chiokike znọhia be. 11 Kam kpayarụ, Chiokike ziznenu be rikne o mee nhne bụ́o ọma ma be kweru aghalaghala, 12 ka bụ ma kpakara ele kwéle o kweru ezi ọka, ele whnụrnu arụru-ẹli n'anya bụru ele ikpe Chiokike marnụ.
13 Kọvu a nọotunu Chiokike mmamma ige ọbula kwnornu anụ rụmu nda aị, ele Nyenwe aị whnụrnu n'anya. Hite n'ọpanizo, Chiokike họhiaru anụ ma ọ znọhia anụ hite n'ẹrnu Enine Nsọ ke neeme anụ zịri nsọ, kwnornu nụ anụ kweruru ezi ọka. 14 Kam kpayarụ, o sukwuru anụ hite n'izi ọma aị, ma anụ kehịa igwe n'igwugwu Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. 15 Rụmu nda aị, anụ gwuzoru kwem, anụ jikwasi nhne a znirni anụ rikne, hite n'ikwu-ọnu mọbu ọkwukwo izi a gbarụ.
16 Kịtna, Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi n'iwhuru a nụ Chiokike Nda aị, nye whnụrnu aị n'anya, hite n'oru o nyernu aị nụ olile anya bụru ọma, mee a gwuzosi rikne, 17 gba anụ inwe, mee anụ gbasị rikne nụ kpakara ẹrnu ọma nụ ikwu-ọnu.